Gbasara Anyị - Hebei Jiuhe Hengye Fastener Manufacturing Co., Ltd.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Manufacturing Co., Ltd., nke dị na Yongnian, Handan, Hebei Province. Ngwaahịa bụ isi: mkpụrụ osisi dị elu, mkpụrụ osisi nwere ike dị elu, mkpụrụ dị elu maka ihe owuwu nke ígwè, mkpụrụ pụrụ iche maka ihe owuwu nke igwe, wdg. ejiri mee ụdị ụdị agba oyi ọ bụla dị iche iche dịka mkpụrụ akụ, kposara, bolts, hex bolte ， flange Bolt ， U Bolt ， igwe eletriki eletrik ， wdg. ụlọ ọrụ nwere ndị ọrụ nwere teknụzụ na ezigbo ọfịs.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Manufacturing Co., Ltd bụ ntọala nke nyocha sayensị, mmepụta, njikwa dịka otu n'ime ngalaba ụlọ ọrụ zuru oke. Jiuhe Hengye na-agbaso amamihe nke azụmahịa nke "ọrụ na-eme ka uru ya baa uru ma nwee mmeri ụwa", na-eme ihe gbasara ọdịmma ụlọ ọrụ nke "iguzosi ike n'ezi ihe, ọrụ, imekọ ihe ọnụ na ịkekọrịta", ma na-agba mbọ ikepụta ịdịmma nke "Jiuhe Hengye". Na-agbaso niile si ele onye ahịa anya, mkpa ndị ahịa chọrọ ngwa ngwa, chee banyere ihe ndị ahịa na-eche, gbaso usoro mmeri nke akụkụ abụọ ahụ, ma mepụta uru maka ndị ahịa.
Ruo ogologo oge, ndị na-emepụta Jiuhe Hengye nwere aha dị elu na ụlọ ọrụ ngwa ngwa site na sistemụ mmesi ike zuru oke, sistemụ nchịkwa siri ike, nrụpụta siri ike na nchọpụta dị elu na ụzọ nyocha na ụzọ nkwenye. A na-ere ngwaahịa ndị ahụ nke ọma na mpaghara karịrị 20 na mpaghara nwereonwe na China, ndị ahịa na-atụkwasakwa obi ma na-akwado ha, ma nweta ezigbo mma.
Site na ọtụtụ ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama mba ụwa na-emebe ma na-emepụta ihe anyị, ebubatala ngwaahịa anyị na Hong Kong, South Korea, Japan, Australia, Britain, Europe na Middle East.
Ihe niile ịchọrọ ịmepụta weebụsaịtị mara mma